နောက်ထပ် ကပ်ရောဂါဆိုးတခုလား – ပါကစ္စတန်မှာ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ လူ ၁၄ ယောက်ရုတ်တရက် သေပြီး ရာနဲ့ချီ ဖျားနာ
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ကရာချီမြို့ရဲ့ တောင်ဘက်က ဆိပ်ကမ်းမြို့လေးမှာ လူ ၁၄ ယောက်ဟာ ရုတ်တရက်သေဆုံးခဲ့ပြီး ရာနဲ့ချီတဲ့ လူတွေဟာ တူညီတဲ့ လက္ခတွေနဲ့ ဖျားနာမှု ဖြစ်ပွားနေပါတယ်…အစိုးရအနေနဲ့ ဘာကြောင့်ဖြစ်ပွားရတယ်ဆိုတာ တိတိကျကျ အဖြေမပေးနိုင်သေးပါဘူး…
ရာနဲ့ချီတဲ့လူတွေဟာတွေဟာ အဆိပ်တစ်ခု မိထားသလို လက္ခဏာမျိုးဖြစ်နေပြီး… ရင်ဘတ်အောင့်တာ အသက်ရှုရခက်ခဲတာတွေနဲ့ မျက်လုံးပူလောင်နေတာတို့ ဖြစ်နေကြပါတယ်…ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့က ကမာရေး ဆိုတဲ့ဆိပ်ကမ်းမြို့လေး မှာ ဂက်စ်ယိုစိမ့်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အဲဒီ ယိုစိမ့်ခဲ့တဲ့ ဂက်စ် တွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ အစိုးရ အရာရှိတွေက ယူဆနေကြပါတယ်…
ဒီသတင်းဟာ ဒေသတွင်းမှာ ရုတ်တရက် ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီး လူထုကို စိုးရိမ်ကြောက်လန့်မှုတွေ ဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်… အစိုးရအနေနဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို သေချာ တိတိကျကျ မဖြေရှင်းပေးနိုင်တာကြောင့်… ပြည်သူတွေက အစိုးရကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ နေ့က ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်…ဒီလို ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာ လူပေါင်းငါးရာလောက်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပြီး… တစ်ချို့ဟာ စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေနေတွေနဲ့ ဆေးရုံတင်ထားရပါတယ်… ဘာမှန်းမသိတဲ့ အခြေနေကြောင့် ကမာရေးက ကျောင်းတွေနဲ့ စက်ရုံတွေလည်း ပိတ်ထားရပါတယ်…
ဒါအပြင် အဲမှာရှိတဲ့ အစိုးရပိုင် လောင်စာဆီတင်ချလုပ်တဲ့ ဆိပ်ကမ်းကို လည်းကို ယာယီပိတ်ထားရပါတယ်…တစ်ခြားအစိုးရ အရာရှိတွေကတော့ သေဆုံးမှုနဲ့ ဖျားနာမှုတွေရဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကို စုံစမ်းလေ့လာကြည့်ရာမှာ… အဲဒီဆိပ်ကမ်းမှာ ကုန်လာချတဲ့ သဘေ်ာ ပေါ်က မြေပဲမှုံတွေ ပျံခဲ့ကြောင့် ဓာတ်မတည့်မှုတွေ ဖြစ်စေခဲ့တာ လို့ဆိုပြန်ပါတယ်… ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေကတော့… ဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထင်မြင်ချက်ကို ပြေကြားချင်း မရှိကြသေးပါဘူး….
သဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကတော့…ဆိပ်ကမ်းမှာ ဆီထုတ်ရာက ထွက်လာတဲ့ ဟိုက်ထရိုဂျင်ဆာလဖိုက်တွေကြောင့် ဒီလို ရောဂါ လက္ခဏာတွေနဲ့ လူသေဆုံး ဖျားနာမှု ဖြစ်လာတာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်…
အဲဒီဒေသ ခရိုင်ရဲ့ သိပ္ပံဓာတ်ခွဲခန်း ဉက္ကဌကတော့…ဒီဆိပ်ကမ်းက သဘေ်ာကြီးတွေမှာ သုံးတဲ့ ဖြန်းဆေးတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ မီသိုင်းဘရိုမိုက်တွေ ကြောင့် ဖျားနာ သေဆုံးမှုတွေ ဖြစ်လာစေတာလို့ဆိုပါတယ်…
ကရာမေး ဆိပ်ကမ်း ဉက္ကဌ Jamil Akhtar ကတော့…ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ သူ့ဆိပ်ကမ်းကနေ စခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးလို့ သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်… သူဟာ သူ့ဆိပ်ကမ်းက ကုန်တင်ကုန်ချနေရာတွေ သဘေ်ာ ရပ်နားရားနေရာတွေကို စစ်ဆေးပြီးပြီလို့ ဆိုပြန်ပါတယ်…
ပါကစ္စတန် ဆိပ်ကမ်း ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး Ali Haider Zaidi ကတော့ ဒီဖြစ်စဉ်တွေကြောင့် နိုင်ငံရဲ့ ဆိပ်ကမ်း စီးပွားရေးကို အနှောက်အယှက် မရှိပါဘူးလို့ ၁၇ ရက်နေ့က တွစ်တာမှာ ရေးခဲ့ပါသေးတယ်…
‘ အဲဆိပ်ကမ်းကို ကျနော် တစ်နေကုန် သွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်… ကုန်တင်တဲ့ သဘေ်ာတွေက ကုန်တင်နေတယ် ကုန်ချတဲ့ သဘေ်ာတွေက ချနဲ့ ပုံမှန်လည်ပတ်ပါတယ်…. “ လို့ရေးခဲ့တာပါ…အစိုးရဟာ ဒီကိစ္စကို ရှင်းလင်းစွာ အဖြေမပေးနိုင်သေးလို့ ကြီးမားတဲ့ ဝေဖန်ခံရမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်…
‘ ဒီဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုလုံးက ပါကစ္စအစိုးရရဲ့ သဘာဝ ဘေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမှာ ဝေဖန်စရာတွေ အများကြီး ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ ထုတ်ဖော်ပြသလိုက်တာပါပဲလို့” ကရာချီ အခြေစိုက် သတင်းထောက်တစ်ယောက်က ပြောပါတယ်…
ဒီဖြစ်ရပ်ကြောင့် လူတွေ သေဆုံး ဖျားနာနေတာ သုံးရက်တောင် ကြာသွားပြီ ဒါပေမယ့် အစိုးရအနေနဲ့ ဘာကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အခုထိ တိတိကျကျ မဖြေနိုင်သေးပါဘူးလို့… ဆက်လက်ပြောခဲ့ပါတယ်
ref – https://www.nytimes.com/2020/02/19/world/asia/karachi-pakistan-gas-leak.html?referringSource=articleShare&fbclid=IwAR2fGF09wLlmxb4M_1xh–bWRiTpebnQfRkEkaSowtXab9h2KOFHnzrVcso
လေးစားစွာဖြင့် ခရစ်ဒက် …… Myanmar International Breaking News